MAANHADAL: Muxuu yahay waxa Kenya laga filan karo? (daawo) – Radio Daljir
MAANHADAL: Muxuu yahay waxa Kenya laga filan karo? (daawo)
Oktoobar 15, 2021 10:50 b 0
Kulanti wacan dhegaystiyaal ku soo dhawadda Barnaamijka Maanhadal oo todobaadkan uga hadli doonaa, Muxuu yahay waxa Kenya laga filan karo? Soomaaliyase maxaa la gudboon? Dhulkaasi la xukumay iyo go’aanku muxuu Soomaaliya uga dhiganyahay?
Waa maxay hadafka laga lahaa bandhig Nabadda Buugaagta ee Gaalkacyo? ( daawo)